ISgo’doomin- Hadii lagaa helo cudurka COVID-19 (Selvisolation på somali)
Hadii jirrada COVID-19 kugu dhaco, ayna kuu timaado warqad cadaynaysa inaad jirrada qabto, kadib tijaabadii lagaa qaaday. Waxaa markaas muhiim ah, inaad isgo’doomiso, si markaas looga hortago in jirradu sii faafto.
HADII AY NOQOTO INAAD GURIGAAGA ISKU GO’DOOMINAYSO
Inaad gurigaaga isku go’doomiso macnaheedu waa:
Inaad gurigaaga joogto(ama guri kaleeto oo ay kuugu suurtagelayso isgo’doomintu aad joogtaa – lacala hadii aad leedahay samarhuus), taaso aysan suurtagal ahayn inaad dadkale la kulanto.
Shaqo ha aadin, banaankana ha ubixin si aad usoo adeegato, dad kale udirso adeega, eey banan ubixin iyo wixii kaloo danahaaga ahba. Hadii adeeg ama alaab laguu keeno, dadka ka codso ineey albaabka banaankiisa kuu dhigaan.
Booqashooyinkii kuu balansanaa oo dhan waa inaad baajisaa.
Waa inaad si khaasa isaga dhowrtaa ama uga fogaataa dadka jirradaan unugul oo tabarta daran, Corona-virus-kana rafaad xoog leh kala kulmi kara (dk/corona).
Iska ilaaliya in dadkale jirkiinu istaabto, sida inaad qof kaleeto dhunkato ama hab isa siisaan, ugu yaraan isku jirsada fogaan dhan 2bo mitir.
Iska ilaaliya inaad qol wada seexataan ama inaad hal qol waqti dheer kuwada qaadataan.
Sida ugu fiicanu waa inaad qol kaligaa degto iyo musqul kuu gooniya, hadii aan taas la heli Karin oo aad hal guri wada degan tihiin, markaas waa in adiga jirrada qabaahi xil iska saarto oo aad nadiifisaa meelaha la taaban karoo dhan, sida adigoo alkolo ku masaxa fadhiga musqusha, gacmo dhaqa, tubada biyaha ka hor intaan qofkale oo guriga kula degan oowsan kaaga daba marin isticmaalka meelahaasoo dhan.
Hadii aad haysato ilmo yar, waxaan kugula talin lahayn, bal hadii oow jiro qofkaloo wayn oon jirrada qabin, gurigana kula degan, in qofkaasi kaala wareego haynta ilmahaas. Hadii taas aysan suurtagal ahayn, markaas adiga jirran waa inaad xil wayn iska saartaa nadaafada, fiiro gaarana uyeelataa in ilmahaasu muujiyo calaamadahii jirrada Corona.
Hadii dadka jirrada qaba ee guriga kula degan ay badan yihiin, markaas intiina jirran is go’doomiya oo isla dega hal qol.
Qoraalkaan wuxuu ku tusinaayaa sida aad wax yeeli lahayd, markaad gurigaaga isku go’doomiso: Til dig, der er testet positiv for COVID-19.
Baalasha qoraalkaan waxaa lagu tarjumay luuqado kala duwan sida: Af Somali, af-carabi, afka farsiga, af-turki, af-ingiriisi, afka urduga, afka tigreega, afkurdi iyo afka bolishka.
Malagaa helay cudurka Covid-19, mana haysatid guri ama meel aad isku go’doomin karto, markaas waxaad ka mid noqon kartaa koox loo heli karo meel gurigooda ka baxsan, aadna si iskaa ah iskugu go’doomin karto.
Waana kumuunaha cidda, asagoo adiga kula tashanaaya qiimaynaaya, in adiga lagu siin karo meel aad isku go’doomiso oo aan gurigaaga ahayn.
Waxaad ka mid noqon kartaa kooxdaan xaqa uleh in meel kale la dejiyo oon gurigooda ahayn, hadii aad adigu:
Aad gurigaaga la degan tahay dad tiro badan, isla markaasna aysan suurtagal ahayn qol aad uga durukto/isku cidleeyso, sidaas darteedna aysan suurgal ahayn inaad kala fogaataan, khaasatan aysan suurtagal ahayn inla dhowro kala fogaanshihii 2da mitir.
Inaad la degan tahay hal ama labo qof oo ah dadka jirrada unugul ee dhibka xoog leh kasoo gaari karo jirrada Covid-19, inaad kala fogaataana aysan suurgal ahayn.
Inaad la degan tahay dad waawayn ayna ku adag tahay ineey wax fahmaan, kadibna raacaan talo siinta ku aadan inaad kala fogaataan, adiguna aad waqtigi isgo’doominta ku jirto – dadkaasi waxay noqon karaan dadka qaba cudurka maandoowga, ama cillado kale oo wax garasho iyo fahamkooda hoos udhigaysa qaba.
Isgo’doominta noocaana waa mid ku qabsoomi karta, iyadoo dadka la dejinaayo guryaha dadka waayeelka lagu hayn jiray oo laga guuray. Hadii lagu dejiyo guryahaan mudada isgo’doominta ah, markaas waa inaadan ka bixin hooygaan inta aad isgo’doominta ku jirto, xitaa laguma soo booqan karo. Waxaa suurtagala inaad goobta ka gadato cunto, 3ex jeer oo cunto ah maalintii waana 150kr. waxaa kaloo suurta gala in qof kuu keeno cunto gooniya, cunto banaan ka keeniduse waa ineey noqotaa midaad kala balantay dadka howl-wadeenada meesha ka ah iyo in cuntadaada la dhigo oon lasoo dhaafsiin banaanka albaabkaaga.
Xasuusin: Horta marka hore waa in jirrada Covid-19 lagaa helaa, si ay fursadaanu kuugu suurtagasho. Marka 1aad waa inaad la xiriirtaa kumuunaha, markeey kusoo gaarto jawaabta tijaabadii jirrada.
Kadibna aad kumuunaha la xiriirto, adigoo wacaaya telefoonadaan hoos ku yaal:
Telefonnummer 89 40 20 00, maalin kasta inta udhexeeysa kl. 10.00 – 14.00
Maalmaha weekendga tlf. 86 12 10 21 inta udhexeeysa kl. 09.00 – 11.00
Wixii macluumaad isgo’doominta ah oo intaas ka badan waxaad ka aqrisan kartaa qoraalka bogiisa internetka: Macluumaadka ku saabsan isgo'doominta iskaaga ah.
Hay’adda caafimaadka bogooda internetka waxaad ka heli kartaa qoraalkaan oo lagu tarjumay luuqado badan sida: afsomaliga, afcarabiga, afingiriisiga, afka farsiga, afka kurdiga, afka bolishka, afka tigreega iyo urduuga.
Sidst redigeret d. 19. august 2020